कोरोनाको प्रभाव कम गर्न राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छः अर्थविद्
काठमाडौं– अर्थविद्हरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पर्ने भएकोले सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले आयात र निर्यात ठप्प हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भएकोले निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको मनोबल गिर्न नदिन राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पर्यटन व्यवसायमा विश्वव्यापी असर परेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई केही समयको लागि भन्सार छुटको सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेलले कोरोनाले रोजगारी र रेमिटेन्स आप्रवाहमा प्रभाव परेको बताए । उनले भने, “नेपालले लिएको ऋण डलरमै तिर्नुपर्ने भएकोले डलरको मूल्यवृद्धिले पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।”
प्याकुरेलले उपभोक्ताका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाईसमेत सरकारले केही राहत दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भारतमा असर पर्दा नेपाली अर्थतन्त्र स्वतः प्रभावित हुने धारणा राखे।
निर्माणको क्षेत्रमा पनि कोरोनाको ठूलो प्रभाव परेको अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, “यो वर्ष सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसले १५औं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि असर गर्छ।”
अधिकारीले सरकारसँग भएको पैसा खर्च गर्ने बेला यही भएको बताए ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारकै कारण जनता मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर र हारेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “यस्तो बेला सरकारले उपभोक्ताका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”